“Way ku adkaan doontaa Eriksen inuu ku soo laabto garoomada kaddib Euro 2020” – Halyeey kooxda Liverpool ah - Hargeele - Wararka Somali State
(Yurub) 17 Juun 2021. Halyeeyga kooxda kubadda cagta Liverpool ee Graeme Souness ayaa wuxuu tilmaamay fikirkiisa ah in laacibka reer Denmark ee Christian Eriksen ay adkaan doonto inuu markale ku soo laabto garoomada kaddib Koobka Qaramada Yurub ee Euro 2020.
Christian Eriksen ayaa miyir daboolmay ciyaartii ugu horeysay oo uu xulka qaranka Denmark kula ciyaaray Koobka Qaramada Yurub ee Euro 2020 dhigiisa Finland, sababa la xiriira wadno xanuun awgiis.
Sidoo kale halyeeyga kooxda kubadda cagta Liverpool ee Graeme Souness wuxuu la soo kulmay dhibaatooyin dhanka wadnaha ah, taasoo ka dhigeysa in hadalkiisa uu ku saleeyo khibrad shaqsiyeed.
Haddaba wargeyska “Daily Mail” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Graeme Souness, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaan ahay safiirka British Heart Foundation, kuwaasoo qabanaya shaqo aad u fiican.”
“Wadna xanuunka waa dilaaga ugu weyn ee dalka, wuu igu dhacay, waxayna taasi dhacday 29 sano kahor, wali waan joogaa halkan.”
“Marka la fiiriyo wixii ku dhacay Eriksen way ku adkaan doontaa inuu ciyaaro kubadda cagta markale, waxaan rajeyneynaa inuu markale ciyaaro, laakiin taasi wey adkaan doontaa.”
Madaxweynaha Hirshabeelle oo si diiran loogu soo dhaweeyey Turkiga “Sawirro”
Wasiir Ku-xiggeenka Warfaafinta XFS oo si weyn loogu soo dhoweeyay magaaladda Hobyo “Sawirro”
RASMI: Juvntus oo shaacisay in Cristiano Ronaldo uu dib ugu soo laabtay magaalada Turin
Kooxaha Everton iyo Man United oo dhibacaha ku qeybsaday garoonka Goodison Park… +SAWIRRO
Horudhac: AC Milan vs Manchester United… (Miyuu kusoo bilaaban doonaa Zlatan Ibrahimovic?)